Saturday February 16, 2019 - 10:19:48 in Wararka by Mogadishu Times
Balse sidee ayay macquul ku tahay in mataano wada dhashay ay yeeshaan labo aabe oo kala duwan? Saddex waalid iyo labo caruur ah
Image captionSimon and Graeme Berney-Edwards with their children Alexandra and Calder
Markii Simon iyo Graeme Berney Edwards ay go'aansadeen inay noqdaan waalidiin, howl culus ayaa ka hortimid.
Daawo: mataano 19 sano isku dhagganaa
Qorshahoodii hore waxuu ahaa inay dhalaan labo carruur ah oo kala hooyo ah, balse hay'adda ka caawineysay kaalmeynta ayaa u sheegtay inay suuragal tahay inay calool galaan labada ilmood hal mar, waliba hal hooyo uurka ku qaaddo.
"Waxaan doorranay Canada sababto ah waxaan jecelnahay sharciyaddooda," ayuu yiri Simon oo ah mid ka mid ah aabeyaasha. "Waa xaalad la mid ah tan UK, ma ahan wax la jecelyahay. ma ahan wax laga ganacsado."
Carruur loo dilay "si looga ganacsado" xubnaha jirkooda
"Waxyaabo badan ayaa ka guuxayay maskaxdeena," ayuu yiri Graeme. "Aad iyo aad baan u faraxnay, aad iyo aad waliba."
"Abid ha cusleysan wax walba," ayuu yiri Simon oo dhoolacaddeynaya.